I-SAS ibuyele kwishishini ngentlawulo engcono
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » I-SAS ibuyele kwishishini ngentlawulo engcono
Airlines • isikhululo • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseDenmark zokuPhula • Iindaba zaseNorway zokuPhula • Iindaba zaseSweden eziQhekezayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
I-SAS kunye nabaqhubi beenqwelo moya zabo bafikelela kwisivumelwano. Abahambi rhoqo eMantla Yurophu bayakuvuyela ukubona iintsuku ezisixhenxe zokuphuma ziphelile.
Uhambo lweentsuku ezisixhenxe lubone ngaphezulu kwesibini kwisithathu sokurhoxiswa. Ngaphezulu kweenqwelomoya ezingaphezulu kwama-4,000 ezingakhange zisebenze zikhwele abakhweli abangama-350,000. Ukuphazamiseka kubandakanya zonke iinkonzo zokuhamba ixesha elide kunye neendlela ezininzi zokurhweba ngabantu eziphakathi kweendawo ezinkulu zaseScandinavia.
Nangona kunjalo, ukuphazamiseka kulindeleke ngolwesiHlanu njengoko iinqwelomoya kunye nabasebenzi befuduswa bommandla wonke.
Ekupheleni kwangoLwesine ngokuhlwa, i-SAS iqinisekisile ukuphela kwesitrayikhi kwinkomfa yoonondaba emva kweentsuku ezimbini zokucamngca okunzulu.
Isivumelwano sinika abaqhubi beenqwelo moya ukonyuka kwemivuzo ngeepesenti ezi-3.5 ngo-2019, iipesenti ezi-3 ngo-2020 kunye neepesenti ezi-4 ngo-2021. Isigqeba solawulo se-SAS uRickard Gustafson naye ucacisile ukuba iminyinyiva yenziwa kutshintsho lokuqikelela kunye nokuguquguquka.
Abaqhubi beenqwelomoya ekuqaleni babefuna ukunyuselwa umvuzo ngepesenti ye-13 ukuze bakhuphisane nezinye iinqwelomoya.
Ingeniso elahlekileyo iya kuxabisa i-SAS ngaphezulu kwe- $ 50 yezigidi. I-airline yenze inzuzo ngo-2018 emva kweminyaka eliqela enzima, ethintela ukuba ungabinamali ngo-2012.